VaRobert Mugabe naVaEmmerson Mnangagwa
Mutungamiri wenyika varizve mutungamiri weZanu-PF VaEmmerson Mnangagwa vanoti vari kushushikana zvikuru nemashoko ekuti vaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vane chekuita nebato rinopikisa reNational Patriotic Front iro riri kutungamirwa naVaAmbrose Mutinhiri parizvino.
Vakatiwo vari kusora VaMugabe kuona zvavari kuronga votora matanho akakodzera kana zvaonekwa kuti vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika.
VaMnangagwa vakataura mashoko aya muHarare pamusangano wevechidiki vebato ravo.
Bato reNPF iri rakanyoreswa kuvabato rinokwikwidza musarudzo kuZEC nemusi weChipiri uye riri kutarisirwa kuparurwa svondo rinouya.
Vamwe vari mubato iri vanosanganisa vaive muchikwata chinonzi G40 chakadzingwa muZanu-PF muna Mbudzi apo mauto akabatana nevanhu kumanikidza VaMugabe kuti vasiye basa.
Mukuru wesangano revechidiki muZanu-PF VaPupurai Togarepi vanoti vechidiki vebato iri vachaguma votadza kuremekedza VaMugabe vakada kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Pamusangano uyu vamwe vaitotiwo “Pasi naVaMugabe.”
Mashoko aya ari kuuya paine mashoko ekuti mauto ainge atora vamwe vashandi vekumba kwaVaMugabe kuBlue Roof kuBorrowdale akaenda kunovabvunzurudza kune mumwe muzinda wemauto. Mauto aya anonzi aibvunza kuti Muzvinafundo Jonathan Moyo naVaSaviour Kasukuwere varipi.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti Amai Grace Mugabe vave kutya kugara pamba mushure mekutorwa kwevashandi vavo.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri waVaMnangagwa VaGeorge Charamba kana mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro soro paUniversity of Johannesburg, Doctor Pedzisayi Ruhanya vanoti kunyangwe hazvo zvichida kuti VaMugabe vaende pamudyandigere sezvo vakura, ikodzero yavo kuti varambe havo vachiita zvematongerwo enyika.
Zvichakadaro, VaMngangagwa mangwanani ano vari kutarisira kuita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia VaSergey Lavrov avo vakapinda munyika nezuro manheru.
VaMnangagwa vanonzi vachapihwa mashoko akakosha kubva kumutungamiri weRussia VaVladimir Putin. VaLavrov vari kushanyira nyika dzakaita seAngola, Namibia, Mozambique neEthiopia.
Rwendo urwu rwuri kuuya apo munyori munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica VaRex Tillerson vari kushanyirawo dzimwe nyika dzemuAfrica. VaTillerson vari kushanyira nyika dzinoti Chad, Djibouti, Ethiopia, Kenya neNigeria.